Hunyanzvi hwakasununguka, zviwanikwa hazvisi ... Martech Zone
Muvhuro, September 25, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndasvika kumba nhasi. Ini handisi kunzwa mushe - ndinofunga akawanda, akawanda, akawanda maawa ebasa uye kushushikana kuri kundibata. Ndakaumburuka pasofa magetsi achibva abuda. Zvinogona kungowedzera kuipa kana kuchinaya uye kutonhora.
Ndanga ndine imwe nguva yekuverenga uye kurara mangwanani ano kuyedza kuzunza chero chipembenene chandiinacho. TechZ yakataura pamabhuku ese andiri kuverenga… kazhinji haambo pfuure nepasi pe3. Ndiri kuverenga matatu izvozvi uye ndine vamwe vaviri vakamirira mumashure maizvozvo. Ndinoda kuverenga. Zvinonatsa musoro wangu uye zvinondinakidza kupfuura kuona bhaisikopo kana terevhizheni. Ini ndinoudza vana vangu kuti chinhu chikuru pakuverenga ndechekuti iwe unowana kupenda iyo pikicha kana bhaisikopo mumusoro mako. Pandinoenda kunoona bhaisikopo rakanyorwa nezvebhuku, ndinowanzoodzwa mwoyo.
Ini ndinodhira… uye ini ndangosara nemaminetsi makumi matatu kana zvakadaro palaptop yangu. Uye muvakidzani wangu angangondiwana ndichibira router yake (isina kuchengetedzeka, hongu). Pandaiverenga ndakatanga kufunga, uye ndaida kunyora nezvazvo.
Heino dzidziso yangu… ruzivo haruna kukosha sezvarwamboita. NeInternet, ruzivo rwuri kudhura uye kudhura neechipiri. Mazuva ekuhaya vanachipangamazano kuti vatiudze zvatiri fanira kuve uchiita zviri kumashure kwedu kumashure. Panzvimbo iyoyo, isu tinopinza vanopa mazano nekuda kwezvavanoita anogona uve uchitiitira.
Zviwanikwa zviri kuwedzera mukukosha uye ruzivo rwuri kuderera.
Ndine ruzivo rwakakwana kuvaka kambani hombe. Chandinoshaiwa zviwanikwa - nguva nemari. Pandinobvunzurudza vanoona nezvevanopa mazano, hazviwanzo nekuda kwezvavanogona kana zvavanotadza kundiudza. Muchokwadi, ini ndinowanzo nzwisisa zvishoma kupfuura zvavanoita pane zvandiri kukumbira kwavari. Kana ndikanzwa kugadzikana navo, ndinovashandira kuti vaite basa riripo… nekuti ivo vanokwanisa kutarisisa kutarisa kwavo chete panhau. Ini handikwanise kuzviita.
Makore apfuura, ini ndaigadzira yangu mota. Ndakanga ndaita zvese zvaivepo zvekuita kumota. Ini ndaive nenguva, saka ndaienda kunotenga bhuku ndorovera kunze. Sezvo ini ndinokura, handichanakidzwe nekukorobha mapundu angu zvekare saka ndinongouya nawo kuchitoro. Zvakakosha nguva yangu kuti mumwe munhu azvigadzirise pane kuti ini ndizvigadzirise. Kunyangwe nemutengo wakawandisa wekugadzirisa mota.
Iyi haisiyo nzira iyo zvinhu zvese zviri kufamba mukati? Ngatitorei Injini Yekutsvagisa (SEO) semuenzaniso. Ndine chivimbo chekuti, ndikapihwa nguva, ini ndinogona kuvaka sandbox nharaunda, tweak uye kuyedza kuti ndione kuti ndingakwira sei kumusoro kweimwe neimwe yeinjini dzekutsvaga maalgorithms. Asi ini handina nguva yeizvozvo. Chokwadi - havazi vese vanogona kuverenga blog uye kutanga kuzviita. Ndinonzwisisa… asi vanhu vazhinji vanokwanisa.
SEO zivo is yemahara - pane chaipo muunganidzwa weSeO saiti uye blog paInternet izvo zvinoramba zvichitumira bvunzo uye zvavakawana. (Ini ndashandisa mashoma ema tweaks pane yangu saiti). Ini handisi kuyedza kuisa pasi SEO maAdvisista… ivo vari zvakakodzera mari yacho. Asi ivo havana kukodzera mari nekuda kwehunyanzvi hwavo, ivo vanokodzera mari seyakakosha sosi. Vanozviita mazuva ese kuitira kuti iwe usafanirwa kudaro!
Indaneti is iyo Ruzivo Superhighway. Ini ndoziva izvo ndezvekare uye zvinyowani, asi ichokwadi. Kugovaniswa kwezivo kuri kudhura uye kuchipa. Kana ini ndichida kutsvaga maitiro ekurapa rangu rakaomeswa ganda raJack Russell kana ini ndoda kugadzira iyo Ajax fomati ... zvakangonaka ipapo kuti ini nditsvage iyo.
Sezvo mambure ari kuwedzera kurongeka uye kuve nyore kutsvaga ruzivo, ndinofunga zvakakosha kuti tizvitarise pashoma se 'nyanzvi' uye zvimwe se'zviwanikwa ' Hunyanzvi hwazara munzvimbo yese uye hwakasununguka pakutorwa. Zviwanikwa hazvisi.
Ungabvumirana nazvo here?
Sep 26, 2006 pa 10: 26 AM
Ini ndinofunga iyi njiva-miswe mushe nezwi rekuti urikuburitsa ... http://www.telco2.net/blog/2006/09/profiting_from_adjacent_busine.html